Oromoon biyya ofii irratti abbaa biyyaa ta’ee mootummaa qabachuu qaba! – Kichuu
HomeAfaan OromooOromoon biyya ofii irratti abbaa biyyaa ta’ee mootummaa qabachuu qaba!
Oromoon biyya ofii irratti abbaa biyyaa ta’ee mootummaa qabachuu qaba!
Oromoon biyya ofii irratti qabsoodhaan abbaa biyyaa ta’ee masaraa mootummaa qabachuu qaba
Dhagahi lammii koo: masterii pilaan lamaffaa kan Adaamaa heck kuma 31 hojjetamaa jira hojiin kun erga hojii eegalee torbe lama ta’eera kan hojjetuu AU fi Institit pilaan M/o fi Bu/M/Adaamaati yoo nama qabattee suuraa kaasisi ani immoo finfinnee jira malee nan kaasa ture
Hojiin kun immoo Mojoo fi Adaamaa walitti makuufidha .
AU hojii kana hojjeechiisuu qarshi. mili.10 ramadee turee yeroo amma kana konkolaata 6 ramadee jiraa ijoollee hojjettu immoo manni siree qabameefi nyaata immoo mallateessan hoteela nigisti kan jedhamuu kan boolee naannoo hospitaala rifitii vaay keessaa fayyaadamaa jiruu
Via : Mohammednur Guye
Obbo Addisuu, Wixineen kun gabbachuu hin danda’, gatamuu qaba. Haarayatti kan biraa qopheessuun dirqama. Wixineen harayni kun qabxiilee armaan gadii ifaan ifatti lafa kaayuu qaba.
– Finfinneen qaama Oromiyaa tahuu
– Finfinneen magaalaa guddoo Oromiyaa tahuu
– Finfinneen akkuma magaalota Oromiyaa kamiiyyu Oromiyaa jalatti kan bultu tahuu fi itti waamamni ishii Cafee Oromiyaatiif tahuu
– Finfinnee keessa sabaafi sabalammoonni jiran hundi mirga heeraan kennameef kan kabajamuuf tahuu
– Jiraattonni Finfinnee bulchiinsa filataniin bulan
– Jiraattonni Finfinnee Caffee Oromiyaa keessatti bakka bu’ummaa qabaatu, itti waamamni bulchinsa magaalattii Caffeedhaaf ta’uu.
– Galii magaalattii irraa Oromiyaan qooddachuu
Qabxiileen ijoon kanuma.Kanuma ogeeyyiin seeraa tolchanii dhiheessuudha. Kun aangoo Oromiyaa ni eegsiaa, mirga saba biraa homaa hin miidhu. Jiraataan Finfinnee Oromiyaa jalatti buluu hin barbaanne dhiisee deemuun mirga isaati.
Via: Jawar Mohammed
Oromoon biyya ofii irratti qabsoodhaan abbaa biyyaa ta’ee masaraa mootummaa qabachuu qaba !! Mirga shasharafamaa qaamni alagaa siif laatu dinnee didaa jedhaa ! Qabsoon itti fufa. Oromoon eenyuu gadi ? Ni turra malee ni urra jette Boombiin/Qumbursiin
Via Hamza Wariyo
የኦሮሚያ ክልል በአዲስ አበባ ከተማ ላይ ያለው ልዩ ጥቅም ረቂቅ ዐዋጅ ከጅምሩ
OPDO diyaaspooraa kesssaa hedduu jiru?????